HomeArimaha Qoyska4 Tiir Oo Muhiim Ah Oo Aad Xidhiidh Xoogan Kula Dhisi Karto Qofka Aad Jeceshahay.
In aad xidhiidh xoogan la dhisto qofka aad jeceshahay ma ahan kaliya masuuliyadaada, dhisida xidhiidh jacayl oo xoogan ayaa loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan laba qof laakiin Nasiib xumo dad badan oo Haatan leh xaas ama wali ku jira Wakhtiga dhisida xidhiidhka ayaan ogayn in ka qayb qaadashada labada qof ee xidhiidhku in ay leedahay miisaan cusub.
Arintaas ayaa intooda badan ku keenta in ay dhibaatoodaan ama kala tagaan sidaasna ku bur-buro xidhiidhkoodu sabab la xidhiidha in ayna iska qaban dhisida xidhiidhkooda.
Waxa jirat arimo badan oo labada qof ka caawinaya in ay dhisaan xidhiidh jacayl oo xoogna waxana aan halkan ku soo bandhigaynaa 4-ta ugu muhiimsan si aad uga faa’iidaysataan.
Tiirka 1-aad: Kaloonida Labada Qof:
Kalsoonida ayaa la sheegayaa in ay tahay xirfad ay tahay in uu qofku barto, Barashada Kalsoonida ayaa ah xirfad aan inta badan dadku ka hadlin, waxa aad maqlaysaa dad ka hadlaya in aad ku kalsoonaato dadka, inaad dhisto kalsoonida, in aad muujiso kalsoonida ama sidee ayaad u soo celisaa kalsoonida laakiin waxa muhii ah in laga hadlo sidee loo bartaa kalsoonida waana mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan xidhiidh xoogan.
Sidaas darteed waa in aad barato sida aad ugu kalsoonato qofka aad jeceshahay, waxa xaqiiqo ah in ayna arintaas ku dhacayn maalmo yar sababta oo ah xirfadad walba waxa ay u baahantahay ku cel-celis si aad u horumariso.
2.Tiirka 2-aad: Ina Aad Lahaato Xirfad Fiican Oo Aad Kula Xidhiidhi Karto Qofka Aad Jeceshahay:
Xidhiidhka Fiican ayaa muhiim u ah wax walba oo Nolosha ah sida Shaqada iyada oo Milkiilayaashuinta badan qiimeeyaan xidhiidhka qofka sababta ayaana ah in ay doonayaan in ay xidhiidh fiican la dhisaan macaamiishooda.
Inkasta oo Xidhiidhka Romantic-ga ah iyo xidhiidh Shaqadu ay kala duwan yihiin hadana guud ahaan xidhiidhka fiican ayaa looga baahanyahay labadoodaba, Tusaale ahaan labada qof ee is qaba waa in ay isku dayaan in ay si fiican iskula xidhiidhaan sababta oo ah waxa ay ku wada noolyihiin hal guri waxa ay wada joogayaan wakhti dheer, hadii ayna si fiican u wada xidhiidhin ma lahaan doonaan xidhiidh caafimaad qaba.
Tiirka 3-aad: Ixtiraam:
Ixtiraamka waa dhaqan laga helo dhamaan xidhiidhada fiican ee awooda leh, Ixtiraam la is dhaafsado waxa lagu qaban karaa waxyaabo badan oo xidhiidh ah, taas ayaana la macno ah in ay gabadhu Ixtiraamto gacaliyeheeeda wiilkuna Ixtiraamo gacalisadiisa waxana ay dhisi karaan xidhiid fiican oo xoogan.
Tiirka 4-aad: Ku Cel-Celis & Tanaasul:
Inkasta oo Muranku yahay mid iska caadi ah xidhiidhada jacaylka hadana marar qaar lamaanaha ama labada qof ee is jecel ayay tahay in ay go’aansadaan in ay isku tanaasulaan.
Marka ay Wiilka iyo Gabadhu ku jiraan xidhiidh waxa fiican in ay Tanaasul sameeyaan, hadii ay labada qof ku cel-celiyaan tanaasulka waxa ay mar walba xal deg-deg ah u helayaan dhibaatadooda ama murankooda waxana ay taasi keenaysaa in uu xidhiidhkoodu xooganaado.
6 Arin Oo Muhiim Ah Oo Dumarka Ku Soo Jiida Ragga Kuna Jeclaadaan